Loan / WEAN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited
ऋण लगानी शिर्षक तथा ब्याज दर
सि. नं. कर्जा शिर्षकहरु (Tpyes of Loan) ब्याजदर(Interest Rate) अवधि (Terms) सेवा शुल्क (Service Charge)
१ साधारण कर्जा १५ % १ देखि ५ वर्ष सम्म १.५ %
२ आकस्मिक कर्जा १५ % १ वर्ष सम्म १.५ %
३ मौसमी कर्जा १५ % १ वर्ष सम्म १.५ %
४ लघुउद्यम कर्जा १५ % १ देखि २ वर्ष सम्म १.५ %
५ धितो कर्जा १५ % १ देखि ७ वर्ष सम्म १.५ %
ऋण लगानी कुनै पनि उत्पादन शिल कार्यको लागि विभिन्न शिर्षकमा गरिनेछ । जस्तो कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन व्यापार, पशु पंक्षी पालन, पशु पंक्षी व्यापार, खुद्रा व्यापार, सेवा व्यापार, आवास/शिक्षा/जडीबुटी/काष्ठकला, घरेलु उद्योग र अन्य शिर्षकहरुमा लगानी गरिनेछ । लगानी गरिंदा साधारणतय २.२.१ को अनुपातमा लगानी गरिनेछ । तर परिस्थीति हेरी आवश्यक्ता अनुसार सबै लाई एकै चोटीपनि लगानी गर्न सकिनेछ ।
ऋृण लगानी गर्न कम्तीमा ५ जनाको १ वटा समूह हुनै पर्छ । साथै यस्ता समूह १ वटा केन्द्रमा ८ देखि १० वटा सम्म सक्छन् । प्रथम पटकमा समूहको कुनै पनि सदस्य लाई अन्य ब्यबसाय, कृषी ब्यबसाय र सेवा ब्यबसायमा गरी रु.१००,०००/– सम्म विना धितो कर्जा दिइनेछ । यो रकम प्रति वर्ष रु. ५०,०००/– ले बढ्नेछ । यसरी सानो कर्जाहरु बिना धितो प्रवाहित हुनेछन् । लघु कर्जा बधिमा रु.५,००,०००/– सम्म हुनेछ । तर कुनै कर्जा विना धितो सुरक्षित नलागेमा धितो पनि लिन सकिने छ । यसको निर्णय केन्दि«य कार्यालय अन्तर्गत व्यवस्थापन समिति ले लिनेछ ।
यस बाहेक लघु व्यवसाय कर्जा रु.२,००,०००/– देखि रु.५,००,०००/– सम्म हुनेछ । यो रकम एक पटक कर्र्जा सफलता पूर्वक भुक्तान गरिसकेपछि मात्र उपलब्ध हुनेछ । यो कर्जा संस्थाले धितो वा विना धितो दुवै प्रकारले दिन सक्नेछ । तर संस्थाले विना धितो दिएको रहेछ र कर्जामा शंका लागेमा धितो पनि माग गर्न सक्नेछ ।
यस बाहेक समूहको कुनै व्यक्तिले लघुकर्जा को सामान्य नियम भन्दा थप हिसाबले कर्जा माग्यो भने संस्थाले आवश्यक सुरक्षण लिई कर्जा दिन सक्नेछ ।
यस का साथै कर्जाको श्रोत निम्न हुनेछन् (क) शेयर पूँजी (ख) सदस्यको बचत (ग) बाणिज्य बैंकहरुबाट लिइने विपन्न वर्ग कर्जा (घ) संस्थाको आन्तरिक जगेडा र कोषहरु (ङ) अन्य कुनै दायित्वहरु । माथिका सबै श्रोतहरुले कर्जा कारोबारलाई निरन्तरता दिनेछन् ।